Nepal Bal Sahitya:: अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
नेपाल बालसाहित्य समाज, मेलुङ फाउन्डेसन तथा सिर्जनशील लेखन समाजको संयुक्त आयोजनामा “पाश्चात्य बालसाहित्यमा ‘बाल’ चित्रण” विषयक अन्तर्कि्रया कार्यक्रम भर्चुअलमाध्यमद्वारा सम्पन्न भयो । ०७७ फागुन ०८ गते भएको उक्त अन्तर्कि्रयाका प्रस्तोता डा. हरिराम अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, जो अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट बालसाहित्य विधामा विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त विज्ञ हुनुहुन्छ ।
अनौपचारिक रूपमा संचालन भएको उक्त कार्यक्रममा नेबासासका तर्फबाट अध्यक्ष प्रा.डा. ध्रुवकुमार घिमिरे, मेलुङ फाउन्डेसनका तर्फबाट अध्यक्ष प्रा.डा. भूपप्रसाद धमला र सिर्जनशील लेखन समाजका तर्फबाट राजनप्रसाद पोखरेलको उपस्थिति रहेको थियो । मोलुङका अध्यक्ष प्रा.डा. धमलाले कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पार्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको थियो । तोकिएको समयभन्दा निकै ढिलो सुरु भएको कार्यक्रममा सुरुमा नै यसका नियमहरु नबनाइएकोले हुनसक्छ, कार्यक्रम संचालनमा केही गढबढी देखापरिरहेको थियो । सुन्दर ढङ्गबाट तयार पारिएको, गहकिला सामग्रीको प्रस्तुतिले सहभागीहरुको ध्यान भने तान्न सफल भइरहेको थियो । यसैले होला कि समय सीमालाई ध्यान दिन भने निकै हम्मेहम्मे परिरहेको थियो ।
कार्यक्रममा नेबाससका उपाध्यक्ष प्रमोद प्रधान, पूर्व अध्यक्ष तेजप्रकाश श्रेष्ठ, महासचिव यशु श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्य शान्ति सापकोटा, आजीवन सदस्यहरू प्रा.डा. कपिल लामिछाने, प्रभा भट्टराई, गङ्गा कर्माचार्य, ललिता दोषी, विजयराज आचार्य, जयन्ती रुपाखेती, विजयराज न्यौपाने, इन्द्रप्रसाद अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । उहाँहरूले विविध जिज्ञासासमेत राख्नुभएको थियो ।